Raha mampiasa Mac sy Photoshop na Lightroom ianao dia esory aloha i Catalina | Famoronana an-tserasera
Manoro hevitra ireo mpampiasa i Adobe mba tsy hanavao ny macOS Catalina
Ny famoahana fanavaozana lehibe dia tsy fitahiana avy amin'ilay andriamanitra nomerika voatahy, fa izay indraindray mitranga toa ny amin'ny macOS Catalina. Ny Adobe no mampitandrina ny mpampiasa azy tsy hanavao ilay kinova macOS vaovao.
Ary toa izany daholo ny zava-drehetra satria tsy tian'ny Lightroom sy Photoshop izany tsy misy na inona na inona Catalina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka momba ny fomba ananan'izy ireo olan'ny fahaiza-mampiasa vitsivitsy rehefa mifampiresaka amin'i Catalina izahay ary mampiasa ny iray amin'ireo programa Adobe roa ireo.
Apple namoaka macOS Catalina amin'ny fiandohan'ny herinandro ary ireo mpampiasa Adobe mihitsy no nitatitra fa tsy mandeha araka ny nampoizina ny Photoshop sy Lightroom Classi CC.
Marina izany ao amin'ireo pejy fanohanana amin'ireo fandaharana roa izay anoroana hevitra fa ireo kinova farany an'ny fampiharana roa dia miasa miaraka amin'ny macOS 10.15, saingy manana ireo olana mifanentana ireo izy ireo. Izany dia raha miasa miaraka amin'ny Mac ianao, aza mieritreritra fanavaozana akory Catalina raha Adobe mamoaka fanitsiana.
Avy amin'ny seho roa, toa ny zavatra rehetra fa ny Lightroom no tena tsy voa. Manana bug izay tsy mamela ny fakantsary Nikon hamantatra isika rehefa velomina ary mandeha ny baikon'ny Start Tether Capture. Ny mombamomba ny mpanamboatra solomaso koa dia 'tapaka'. Adobe dia mikasa ny manamboatra azy amin'ny alàlan'ny fanavaozana azy amin'ny 32bits mankany 64bits.
Ny Photoshop no tena manana ny olana. Amin'izao fotoana izao tsy mandeha tsara ny fanoratana anarana, noho izany ny mpampiasa dia mila manoratra azy io amin'ny tanana. Plugins marobe dia tsy mandeha ary ny mpamorona Lens Profile, izay 32bits, dia tsy mandeha ao Catalina koa satria 64bits izy.
toy izany Manoro hevitra i Adobe fa raha te hijanona hamokatra amin'ny Mac ianao ary ireo programa roa ireo, tsara kokoa ny miandry ny famahana ny olana rehetra. raha jereo ny fampiharana Adobe Fresco vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Manoro hevitra ireo mpampiasa i Adobe mba tsy hanavao ny macOS Catalina
Adobe Fresco dia ho avy tsy ho ela amin'ny Microsoft Surface
Manao fanamby aminao izahay amin'ny Creativos Online: azonao atao ve ny manoritra freehand boribory lavorary miaraka amin'ny takelaka, finday na iPad anao?